I-Minecraft remoteconnect - https://aka.ms/remoteconnect (Lungisa) - Ungakwenza Kanjani
Lungisa Iphutha leMicrosoft Minecraft Aka.ms/remoteconnect (2020)
IMinecraft ngomunye wemidlalo ethandwa kakhulu kwi-inthanethi. Izigidi zabasebenzisi be-intanethi zidlala lesi sihloko esimangazayo. Isici sokuxhuma esikude singaba nezinkinga ezithile. Uma ubhekene nezinkinga ngokungena ngemvume, zama ukulungisa kwethu. Sizoxoxa ngokuningiliziwe mayelana nodaba lwe-https: //aka.ms/remoteconnect Microsoft Minecraft. Isixhumanisi sephutha siza esikrinini sakho lapho kunephutha lokungena ngemvume.
Kuyinkinga ejwayelekile wonke umuntu abhekane nayo okungenani kanye. Kulo mhlahlandlela, sixoxa ngokuningiliziwe mayelana nensizakalo.
Liyini Iphutha le-https: //aka.ms/remoteconnect?
Iphutha le- “https & aka-ms / remoteconnect” livamile lapho uzama i-akhawunti yakho ye-Microsoft. I-Minecraft muva nje ibishintshela kungxenyekazi yeMicrosoft. Kunamathani wezinsizakalo ezimangalisayo endaweni yesikhulumi. Kuyinto umdlalo omkhulu kulabo abajabulela ukwakha izinto.
Iphutha livame ukwenzeka ku-PS4, Nintendo, nakwezinye izinto zokududuza. Ungabhekana nalolu daba kwikhompyutha yakho. Kulesi siqondisi, sizozama ukukulungisa ngezixazululo ezahlukahlukene.
Amakhodi we-Roblox Promo & Wiki
I-NordVPN Netflix - Bukela Ngaphandle kwe-USA
Yini engadala inkinga?
Kunezizathu ezimbalwa okungenzeka ukuthi kungani uzobhekana nalolu daba. Ezinye zezizathu ezivame kakhulu zingokulandelayo.
1. Ukuguqulwa Kwamadivayisi
IMinecraft ihlinzeka ngezinsizakalo ze-crossplay kubasebenzisi bayo. Kusho ukuthi abasebenzisi bangasebenzisa i-akhawunti eyodwa kuwo wonke amapulatifomu. Kuyindlela elula nokho esebenzayo yokudlala kumadivayisi akho. Uma ushintsha idivayisi, ingahle ingasebenzi. Abasebenzisi bangabhekana nezinkinga ngokungena kwabo ngemvume.Isoftware ingahle icwebe futhi ibangele izingqinamba. Ushintsho lwedivayisi yisona sizathu esikhulu sale nkinga ejwayelekile.
2. Idatha yomdlalo okhohlakele
Amafayela wegeyimu adlala indima enkulu kubasebenzisi abaningi. Idatha yemidlalo ekhohlakele izokubangela izingqinamba eziningi. Kungaba yinkinga kuwo wonke amapulatifomu.
Ungahlola uhlobo lwezinkinga zedatha ngedivayisi yakho. Kubasebenzisi be-PC, kulula kakhulu ukulungisa le nkinga. Ukufaka kabusha kungalungiswa ngokushesha kepha kungafaneleki isikhathi eside. Kwesinye isikhathi amafayela wokugcina nawo angonakaliswa. Lokho kuzodala ezinye izingqinamba ngokuvula amamephu wakho wokuqhubeka. Kungcono ukuthatha izipele ezivamile.
Lezi yizizathu ezimbili ezibalulekile zokuthi kungani abasebenzisi bebhekene nenkinga yeMicrosoft Minecraft. Kungaba yinkinga yesikhathi eside uma ungayilungisi ngokushesha. Inqubo ilula kakhulu kubasebenzisi.
Ungayilungisa kanjani i-https: //aka.ms/remoteconnect?
Kulesi sigaba, sizobheka ukuthi sililungisa kanjani iphutha. Umhlahlandlela wethu uzokunikeza izixazululo ezisheshayo nezilula zale nkinga. Nazi izindlela ezahlukahlukene zokuxazulula le nkinga.
1. Inkinga Ye-Crossplay
Ukulungiswa kwezinkinga ze-crossplay kulula kakhulu. Ungalandela lezi zinyathelo ezingezansi. Kuzokusiza ukuletha isipiliyoni esimangalisayo sokudlala. Nazi izinyathelo zokuqala ukudlala kalula kumadivayisi akho.
Abasebenzisi abane-Minecraft kumadivayisi wabo we-Xbox bangayilanda esitolo esisemthethweni. Kuyisinyathelo esibalulekile ukuqala ukudlala kumadivayisi ahlukene. Abasebenzisi badinga ukuba nomdlalo we-Minecraft ku-Xbox One noma i-Xbox 360 ukuyidlala ngokudlala kude.
Ukuthola ikhodi yokudlala ekude, abasebenzisi kufanele bavakashele isixhumanisi esilandelayo - https://aka.ms/xboxsetup . Ungayihlola kusiphequluli sakho se-Xbox. Isayithi lizobonisa ikhodi yesici sokudlala kude. Abasebenzisi badinga ukuthi i-akhawunti ye-Microsoft isebenze futhi isebenze. Abasebenzisi kufanele bangene ngemvume mahhala ukusebenzisa i-akhawunti ye-Microsoft kule webhusayithi. Kuyisidingo ku-Xbox yakho.
Kulula kakhulu ukuqala ukudlala okukude kudivayisi yakho. Sincoma abasebenzisi ukuthi bavakashele isixhumanisi esilandelayo - https://aka.ms/remoteconnect . Vakashela lesi sixhumanisi kusuka kudivayisi ofuna ukusebenzisa isici sokudlala kude. Udinga ukuba ne-akhawunti ye-Microsoft ukuze usebenze kulesi sici esimangalisayo. Ngena ngemvume nge-akhawunti yamahhala noma udale entsha.
Abasebenzisi kufanele bafake ikhodi yokudlala ekude, etholakala kusikrini sakho se-Xbox. Iwebhusayithi izolayisha umdlalo we-Minecraft ngqo uma usufake le khodi.
Kuyamangalisa! Lezo yizinyathelo ezisebenzayo zokuthola isici esikude sisebenze. Siyethemba ukuthi lokhu kuzolungisa inkinga obhekene nayo newebhusayithi. Isebenza kahle kuMicrosoft Minecraft.
Okwe-PS4, izinyathelo zihlala zifana ncamashi nedivayisi ye-XBOX. Nazi izinyathelo zokulungisa noma yimaphi amaphutha ngengxenyekazi.
Isinyathelo sokuqala sabasebenzisi ukuqala ngokuvakashela isitolo sePS4. Ungachofoza inketho yokulanda lapha bese uqala ukuyisebenzisa. Landa umdlalo we-Minecraft kudivayisi yakho. Abasebenzisi badinga ukuba nenguqulo ekhokhelwayo yomdlalo, okungenani kudivayisi eyodwa. Kungaleso sikhathi kuphela lapho ungazama khona izici zokudlala kude.
Uhlobo lwePS4 lomdlalo luzokunikeza ithuba lokungena ngemvume usebenzisa i-akhawunti ye-Microsoft. Chofoza kule nketho bese ungena ngemvume nge-imeyili nephasiwedi yakho. Lapho inqubo isiphelile, ungathola idatha yokuxhuma ekude.
Abasebenzisi bangagcina kalula ikhodi kusuka ku-PS4. Kuyisidingo ukusebenzisa isici sokudlala kude. Sincoma wonke umuntu ofuna ukudlala kumadivayisi amaningi. Yizame kukhompyutha yakho noma kudivayisi ephathekayo. Vakashela iwebhusayithi exhuma kude ukuxazulula inkinga.
3. Gcina Ifayela Inkinga
Izinkinga zokugcina ifayela ziyinkinga ejwayelekile kubasebenzisi be-console. Ungaxazulula le nkinga kudivayisi yakho kalula. Nayi imihlahlandlela okufanele uyizame.
Izilungiselelo zesitoreji kudivayisi yakho zizokunikeza imininingwane edingekayo. Ilula kakhulu kubasebenzisi bePS4. Kufanele uvakashele isithonjana segiya bese ukhetha isitoreji. Amafayela okusindisa azotholakala lapho. Ifana kakhulu nabasebenzisi be-XBOX.
Amafayela wokugcina okhohlakele ayinkinga enkulu kubantu abafuna ukusebenzisa isici sokudlala kude. Ungasusa lawa mafayela bese uqala phansi. Sincoma ukuba nesipele esilungele abasebenzisi abanokuqukethwe okulungile.
Ungazama ukusebenzisa isici sokuxhuma esikude futhi ngemuva kokukhipha amafayela wokugcina. Ilungele izidingo zakho zansuku zonke.
Iphutha le-https: //aka.ms/remoteconnect livame kakhulu kubasebenzisi abaningi. Siyethemba ukuthi indatshana yethu ikwazile ukuphendula yonke imibuzo yakho. Kunezimpendulo ezahlukahlukene enkingeni ejwayelekile.
Manje ungajabulela umdlalo we-Minecraft kalula kusuka noma yikuphi. Ukulungiswa kusebenza ne-Minecraft edition yedokodo.
I-PUBG Yehlulekile Ukuqalisa I-Steam
INetflix vs Disney Plus - Iyiphi Insiza Yokusakaza Ehamba phambili?
Iziphesheli zeNintendo switchch Black Friday 2020 - Ukunikezwa Okumangazayo
Isoftware Engcono Kakhulu Yokuhlela Amavidiyo Windows 10
Izindlela ezihamba phambili zeDropbox Ongazizama ngo-2020
bhalisela i-amazon prime video
ungangena kanjani ngemvume ku-hulu nge-disney plus
i-google home ye-pc mahhala
indlela yokubuka noma iyiphi i-movie mahhala ku-google
lapho cani bukela ama-movie wamahhala online
ngingayibuka kuphi imibukiso mahhala online
ama-movie aseshashalazini abukela online